अन्तरवार्ता Archives ~ Banking Khabar
कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको अनुभव गर्नुभएको छ । महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालले राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततालाई बलीयो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उनले बैंकवित्तको मेरुदण्डका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट कम्जोर बनाउन खोजिएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् । राष्ट्र बैंक आफैमा सक्षम र स्वयत्त भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र बैंक ऐन दोस्रो संसोधन विधेयकले
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले हालै ल्याएको बजेट कृषि, ग्रामिणमुखि वा रोजगार केन्द्रीत भन्ने कुरा आइरहँदा उक्त बजेटले लघुवित्त क्षेत्रलाई भने निरास बनाएको छ । देशमा झण्डै १ सयको संख्यामा रहेका लघुवित्तबाट लाखौं सदस्यहरुले कर्जा मार्फत काम गरेका छन् । गामिण क्षेत्रमा लघुवित्तमा आबद्ध नभएका व्यक्ति कमै छन् । देशको गरिवि घटाउन होस् या
बैंकिङ खबर । कोभिड १९ को सन्त्रासका कारण अर्थतन्त्र कसरी बचाउने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान गइरहेको बेलामा बैंक र व्यवसायी बीचमा मतभेद चलिरहेको छ । व्यवसायीहरु व्याजदर लगायतमा सहुलियत मागिरहेका छन् । बैंकर्सहरु यस विषयमा सहमत छैनन् । व्याजदरको समस्याबाहेक पनि लक डाउनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अन्य थुप्रै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा आगामी दिनमा
लामो समयको लक डाउनले सिंगो अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । आगामी दिनमा यसको प्रभाव झन् गम्भीर हुँदै जाने देखिन्छ । बैंकिङ कारोबारहरु हुन नसकेका कारण व्यवसायमा असर परिरहेको छ । सरकारले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थतन्त्र बढ्दो संक्रमणको त्रासमा रहेको बेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा लागेको छ ।
सुदुर पश्चिमका सबै जिल्लामा वित्तीय सेवा सूचारु भएको छ – निश्चल अधिकारी
बैंकिङ खबर । कोरोनाको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दो रुपमा रहेको छ । नेपालमा विशेषगरी भारतीय सीमाक्षेत्रमा रहेका ठाउँहरुलाई सरकारले जोखिमको रुपमा लिएको छ । यस आधारमा सुदरपश्चिम क्षेत्रलाई बढी जोखिम भएको क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सुदुरपश्चिम प्रदेशको समग्र बैंकिङ अवस्था कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी
लकडाउन थप एकदुईमहिना लम्बियो भने वित्तीय अवस्था भयावह हुन सक्छ
बैंकिङ खबर । कोरोना संक्रमण र लक डाउनका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेका बेला बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना रहेको छ । विशेष गरी फाइनान्स कम्पनीहरुमा हालसम्म कोरोनाको कस्तो असर परेको छ र आगामी दिनमा कस्तो अवस्था रहला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ
लकडाउनमा सहकारीको अबस्था – मिनराज कँडेल
बैंकिङ खबर । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको सन्त्रासले लकडाउन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक कारोबारहरु बन्द भएका कारण आम्दानीको स्रोत बन्द भएको छ भने खर्च मात्रै भइरहेको छ । यसकारण धेरै बचत नभएका विपन्न वर्गहरुमा ठूलो प्रभाव परेको छ । तीनै वर्गको ससाना बचतमा केन्द्रित सहकारी क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको अवस्था छ । कोरोना
“कोरोनाले विपन्न वर्ग र लघुवित्तमा दिर्घकालिन असर गर्छ “
बैकिङ खबर । लकडाउनका कारण विपन्न बर्गमा समस्या बढ्दै गएको छ । समाजमा धेरै विपन्न र गरीव परिवारका व्यक्तिहरु माइक्रोफाइनान्स कार्यक्रममा जोडिएका छन् । कोरोना प्रभाव र लकडाउनको प्रभाव नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा र विशेषगरी माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा बढी पर्ने देखिन्छ । नेपालको गरिवी घटाउन र ग्रामिण अर्थतन्त्र बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको माइक्रोफाइनान्सहरु यतिवेला क्षेत्र के गर्दै
विकास बैंकहरुले सुरक्षित तवरले शाखा खोलेर सेवा दिइरहेका छन् – गोविन्द ढकाल
बैंकिङ खबर । कोरोना संक्रमणको प्रभावले विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रप्रति धेरैको चिन्ता जागृत हुन थालेको छ । चैत्र दोस्रो सातादेखि सुरु भएको लकडाउन मुलुकभर जारी छ । विश्वनै यतिवेला लकडाउनको अबस्थामा छ । यो अबस्थामा पनि बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरुले सावधानीपूर्वक सेवा सूचारु राखेका छन् । कोरोना प्रभाव र लकडाउनले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारे डेभलपमेन्ट
लघुवित्तसँग विपन्न बर्ग जोडिएका छन्, कोरोनाले दिर्घकालीन समस्या ल्याउनसक्छ
प्रकाश राज शर्मा । कोभिड १९ को प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा नै परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकिङ एवं समग्र वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा झन् धेरै नै प्रभाव परेको छ । हाम्रो अधिकांश लक्षित वर्ग विपन्न वर्ग र अरुसँग पहुँच नभएकाहरु छन् । यस्तै वर्गलाई कोरोना र लकडाउनको असर परिरहेको
लक डाउनमा लघुवित्तहरु के गरिरहेका छन् ? (लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालको अन्तर्वार्ता)
बैंकिङ खबर । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण यतिबेला विश्वव्यापी त्रास फैलिएको अवस्था छ । नेपालमा पनि संक्रमण फैलिन नदिन लक डाउन घोषणा गरिएको छ । लामो समयको लक डाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यसको गहिरो प्रभाव परेको छ । विपन्न वर्गमा लक्षित लघुवित्त क्षेत्रमा यसको असर झन्
‘राष्ट्रिय आयोजनाहरुमा लगानी बढाउन पुँजी बजारको विस्तार आवश्यक’
बैंकिङ खबर । जोन र्वाङ्गोम्ब्वा रुवाण्डाको केन्द्रीय बैंक नेशनल बैंक अफ रुवाण्डाका गभर्नर हुन् । राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय, नेशनल ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट लगायतमा जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव भएका जोन २५ फेब्रुअरी २०१३ देखि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर छन् । अर्थमन्त्रालयमा रहँदा पहिलो आर्थिक विकास तथा गरिबी न्युनीकरण कार्ययोजना लागू गरि पाँच वर्षमा औसत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
विगत एक वर्षदेखि शक्तिकान्त दासले भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनको कार्यकाल सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरु भएका छन् । उनले केही नयाँ कदमहरु पनि चालेका छन् । यसैबीच भारतको समग्र बैंकिङ क्षेत्र, व्याजदर लगायतका विषयमा उनै दाससँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ
बीमाको सुरुवात भएको लामो समय भइसकेको छ । तुलनात्मक रुपमा यसको विकास र विस्तारलाई हेर्दा नेपालमा बीमा पहुँच अझै पनि कम छ । तथापी पछिल्लो समय बीमा समितिको सक्रियताका कारण बीमा पहुँचमा केही बृद्धि भएका तथ्याङकहरु आएका छन् । मानिसहरुमा बीमा शिक्षाको अझै पनि अभाव छ । यसलाई पाठ्यक्रममा हाल्न बीमा समितिको सक्रियता बढेको छ